Booliska Kenya oo sheegay in ay Qabteen Nin ay ku sheegeen in uu ka tirsanyahey Al Shabaab
Booliska Magaalada Mombasa ee Dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday in ay gacanta ku dhigeen Nin la aaminsan yahay in uu tirsan yahay Xarakada Al Shabaab.
Saraakiisha amaanka ee Magaalada Mombasa ayaa sheegay in ay su’aallo weydiinayaan eedeysane Rama Cali, kaasi oo lagu xiray Degaanka Mrima, waxaana Ninkan la sheegay in uu la socday 3 kale oo ka baxsaday gacanta Booliska.
Taliyaha Ciidamada Booliska Willy Simba ayaa waxuu tilmaamay in tuhmane Rama uu tababaro ku soo qaatay Xeryaha Al Shabaab, islamarkaana uu ku soo laabtay Dalka Kenya, si buu yiri uu u fuliyo weeraro ka dhan ah Magaalada Mombasa.
Waxaa uu Taliyaha intaasi ku daray in Ninkan haatan su’aalo lagu weydiinayo saldhig ku yaalla Degaanka Likoni ee Magaalada Mombasa, isagoona rajo wanaagsan ka muujiyay soo qabashada kuwa kale ee baxsaday.
Dalka Kenya ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca Weeraro ka dhasha khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo inta badan ay mas’uuliyadooda dhabarka u ritaan Xarakada Al Shabaab.